FANESORANA OLONA AMBONY : Manaja ny fanapahan-kevitry ny Governora ny Depioten’i Mananjary
Somary niteraka disadisa teo anivon’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ny fanapahan-kevitra, izay noraisin’ny Governora tamin’ny nanesorana amin’ny toerany ny sekretera jeneralin’ny Faritra. 4 août 2020
Tsy nanaiky izany ireo Ampanjaka tany an-toerana izay nanao fanambaràna naneho tsy fankasitrahana izany. Nitondra ny heviny mikasika ity raharaha ity ny Solombavam-bahoaka voafidy tao Mananjary ao anatin’ny Faritra Vatovavy Fitovinany, ny Depiote Randrianandrasana Norbert. Ity farany izay manaja tanteraka ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Governora, ka nanala tamin’ny toerany ity sekretera jeneraly eo anivon’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ity.
Ity olom-boafidy ity izay anisan’ireo nanolotra sy nametraka tamin’ny toerany an’io Sekretera jeneraly vao noesorina io. Na izany aza anefa dia nambarany tamin’izany fa “ny fampandrosoana no imasoana, ny Governora no tompon’andraikitra voalohany amin’ny fampandrosoana ny Faritra ka matoa noraisiny izay fanapahan-kevitra izay dia hitany fa mahasoa izany”. “Ny tompon’andraikitra voalohany amin’ny Faritra dia ny Governora. Ny sekretera jeneralin’ny Faritra niaraka tamin’ny tale misahana ny fitantanam-bola no noesoriny.
Hajaina izy amin’izay fanapahan-kevitra noraisiny izay. Izahay no nanolotra an’io sekretera jeneralin’ny Faritra io ary zanaky ny Faritra Mananjary ihany koa izy, izay noeritreretina fa hitondra fampandrosoana miaraka amin’ny Governora kanefa ny fanalan’ny Governora azy dia izy ireo no mahita ny ati-vilany ao. Matoa izy noesorina dia mety tsapan’ny Governora fa tsy mety intsony ny fiaraha-miasa”, hoy ny fanehoan-kevitra noentin’ny Depioten’i Mananjary. Araka ny fantatra noho ny fisian’ny tsy fetezam-pitantanana no voalaza fa antony nanalana tamin’ny toerany an’ireto tompon’ andraikitra roa teo anivon’ny Faritra Vatovavy Fitovinany ireto. Nilaza ny Depioten’i Mananjary fa efa nisy ny anarana vaovao natolotr’izy ireo hisahana indray ireo toerana banga ireo mba hahafahana manatanteraka faran’izay haingana ny asam-pampandrosoana eo anivon’ny Faritra.